Xashiish lala yaabay oo ciidamada Australia ka qabteen xeebaha Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 21 September 2014 22 September 2014
Mareeg.com: Saraakiisha ciidanka badda Australia ayaa sheegay inay qabteen doon sidday xashiish dhan 5.6 tan. Doonta ayaa marka la qabtay waxay ka sii baxaysay xeebaha Soomaaliya, sida ay sheegeen warbaahinta Australia.
Saraakiisha ayaa sheegay in xashiishka lagu qariyay boorsooyin. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa qortay in xashiishka la qabtay uu u dhigmo lacag dhan $280 Milyan oo doollar.
Shixnadda xashiishka ayaa gacanta lagu dhigay kaddib markii ciidanka badda Australia iyo ciidanka cirka ee New Zealand ay ka fuliyeen xeebaha Soomaaliya howlgal socday shan cisho.
Doonta ayaa la sheegay inay u socotay dalalka Bariga Dhexe ama qaar ka mid ah waddamada ku teedsan Badweynta Hindiya.
Golaha Wasiirada oo si rasmi ah u shaaciyey magaca Taliyaha Nabad Sugidda